XASAASI: Mustaqbalka Daafaca Xoogan Ee Kalidou Koulibaly Oo Dhinac U Dhacay & Man United, Man City Iyo Liverpool Oo War Helay - Gool24.Net
XASAASI: Mustaqbalka Daafaca Xoogan Ee Kalidou Koulibaly Oo Dhinac U Dhacay & Man United, Man City Iyo Liverpool Oo War Helay
Daafaca dhexe ee kooxda Napoli ee Kalidou Koulibaly ayaa u muuqda mid mustaqbalkiisa qaabaysmay kaddib dalabaad ay ka gudbiyeen kooxaha Premier League ee Manchester City, Manchester United iyo Liverpool.
Sida ay sheegayaan wararkii ugu dambeeyay, Koulibaly ayaa wadahadalo heshiis kordhin ah la bilaabay kooxdiisa Napoli kaddib markii ay dhammaan kooxaha dalabka kasoo gudbiyay gaadhi waayeen lacagta 70-ka Milyan ee Pound ah ee ay kooxdiisu doonayso.
Lacagta lagu qiimayn jiray Koulibaly ayaa ahayd 90 Milyan oo Pound kahor intii uusan qarxin caabuqa Korona waxaana mudo lala xidhiidhinayay Sky Blues, Red Devils iyo Reds.
Sida uu sheegayo wargeyska Talyaaniga kasoo baxa ee Corriere Dello Sport, madaxweynaha Napoli ee Aurelio de Laurentiis ayaa diyaar u ahaa inuu dhagaysto dalabaadka 70-ka Milyan ee Pound ah.
Laakiin dalabaadka laga gudbiyay daafaca heer caalami ee ree Senegal ayuu midka ugu sarreeyaa ahaa 55 Milyan oo Pound oo ah wax aan u dhawayn waxa ay ku qiimaynayso kooxdiisu.
29 sano jirkan oo la sheegay inuu ku faraxsan yahay joogista magaalada Naples ayaa hada wadahadalo heshiis kordhin ah kula jira Napoli taas oo ka dhigan in kooxaha ree England ee xiisaynayay ay seegeen saxeexiisa.
Koulibaly ayaa ahaa mid Napoli la joogay tan iyo sanadkii 2014 isagoo lixaad sano kaga mid noqday daafacyada ugu wanaagsan Talyaaniga iyo guud ahaan caalamkaba.
Horraantii bishan ayay ahayd markii Koulibaly uu hoos u dhigay wararka bixitaanka la xidhiidhinaya isaga oo si cad u sheegay inuu kubadda cagta kaga fadhiisan karo kooxdiisa haatan.